Vaovao - Ny ekipan'i Sercel sy Tronic ho an'ny Geophones miorina amin'ny MEMS
Sercel sy Microsystems TRONIC, dia niara-niasa tamin'ny famokarana andiana sensor vaovao momba ny seismika, na geofôna, miorina amin'ny MEMS. Namboarin'i CEA Leti, ny haingam-pandeha vahaolana 0.1µg fonosana ao anaty banga dia nohavaozina sy novolavolain'ny Microsystems TRONIC.
Ny Geophones dia misy ny iray amin'ireo vokatra fototra an'ny Sercel (F), izay mpitondra an'izao tontolo izao amin'ny fitaovan'ny seismika ho an'ny fikarohana solika sy gazy. Sensors sensitive sensible be, mandrefy ny taratry ny onjam-peo akustika ny geofôna, alefa eny ambonin'ny saha, amin'ny sosona geolojika samihafa (jereo ny sary 1). Ny angon-drakitra avy eo dia ampiasaina hanoritana sarintany fanadihadiana ara-jeolojika manondro ny toerana sy haben'ny tahirin-tsolika sy gazy.
Geophones, na dia singa elektromagnetika tsy lafo (jereo ny sary 2), dia somary mavesatra sy sarotra satria mila ampifandraisin'ny tariby amin'ny foibe fanodinana afovoany. Ny fitrandrahana solika maoderina izao dia mitaky vahaolana maivana kokoa ary mora kokoa amin'ny finday afaka mandanjalanja be tokoa.
Geophone miorina amin'ny MEMS
Nandany taona maro niasa niaraka tamin'ny CEA Leti (F) i Sercel, mba hanehoana ny fahaizany mamorona geophone miorina amin'ny MEMS. Ny fiaraha-miasa dia nahatonga ny prototype misy geophone mifototra kely kokoa sy maivana kokoa (jereo ny sary 2 sy ny tabilao 1).
Ny prototype dia nahatratra ny fampisehoana tena ilaina: ny vahaolana hatramin'ny 0.1µg, latsaky ny iray tapitrisa ny hery misintona amin'ny tany, mihoatra ny +/- 100mg.
Na izany aza, iray amin'ireo fanamby lehibe napetraka tamin'ny famindrana ny vahaolana miorina amin'ny MEMS avy amin'ny laboratoara mankany amin'ny tsipika famokarana. Ny MEMS dia tsy misy fizotran'ny fanamboarana mahazatra ary manana fitakiana famonosana be dia be ary fomba fitiliana manokana sarotra. I Sercel dia mila mpanamboatra MEMS manokana izay afaka manova ny heviny MEMS ho vokatra indostrialy azo antoka.
Za-draharaha amin'ny indostrialy sy ny famokarana mpamadika MEMS manokana, TRONIC'S Microsystems (F) koa nahafehy ny sakana amin'ny teknolojia geophone an'i Sercel.
Ny maodelin'ny orinasam-pandraharahana MEMS farany ambony an'ny orinasa dia nety indrindra ihany koa tamin'ny filan'ny famokarana Sercel. Noho izany dia nifarimbona orinasa ireo orinasa roa ireo
Manomboka amin'ny prototypes dia nanatsara ny fitaovana i Tronic ary nahafeno ny fomba fizotrany manokana sy ny teknikan'ny fonosana banga. Avy eo ny mpanamboatra frantsay dia niantoka ny fizarana andiany voalohany tamin'ny fiandohan'ny taona 2003 ary androany dia manome singa geophone voafono sy voasedra (jereo ny sary 3) ampidirin'i Sercel ao anaty rafitra nomerika vaovao.
Kitapo vacuum ho an'ny MEMS
Mba hampihenana ny tabataban'ny molekiola amin'ny firafitra ary hahatratrarana ny haavon'ny asa takiana, TRONIC'S encapsulate the silicon microstructure under a very high environment environment in a LCC fonosana. Ity fonosana ity dia mamela ny geophone MEMS hihoatra ny singa Q mihoatra ny 10.000 (vinavina vinavina ao anatin'ny 1mTorr).
Kely kokoa sy maivana kokoa, ny geophone fonosana MEMS fonosana dia tsy mahomby amin'ny famaritana sasany manokana momba ny geopone nentim-paharazana (jereo ny tabilao 1).
Ho fanampin'izany, ny geofone 3 MEMS dia azo ampidirina miaraka amin'ny toerana kely dia kely ihany koa miaraka amin'ny elektronika nomerika manala ny sasany amin'ireo tariby takiana teo aloha. Ny geophone miorina MEMS vaovao noho izany dia manamora ny lojika ho an'ny mpanjifa Sercel nefa mamela famarana singa 3 miaraka amin'ny dinika avo kokoa.
Amin'ny alàlan'ity fiaraha-miasa ity, ny TRONIC'S Microsystems dia nanaporofo bebe kokoa ny fahaizany manova ny foto-kevitra MEMS manokana ho vokatra azo antoka avo lenta ho an'ny fampiharana ratsy.